Indlu kaLucy-igumbi elitofotofo e-Amalfi - I-Airbnb
Indlu kaLucy-igumbi elitofotofo e-Amalfi
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLucy'S
Ukuba ufuna ukuphumla ukwindawo efanelekileyo. Indawo yethu ikwiPogerola iqhezu le-Amalfi, ilali entle eyaziwa ngomoya wayo ozolileyo nococekileyo kunye nosempilweni.
Ukusuka encotsheni yenduli ungabuka ubuhle bendawo ekhangayo yeGulf of Salerno, unxweme lwaseAmalfi kunye nezantsi kwiidolophu zaseLone nasePastena.
Indawo yokuhlala ikwiikhilomitha ezimbalwa ukusuka kwiziko lembali lase-Amalfi, ukusuka kumaziko okhenketho aphambili kunxweme lwe-Amalfi kunye nonxweme lwaseSorrento, kunye nendawo ye-archaeological yasePompeii.
I-terrace enkulu yangaphandle inika umbono omangalisayo. Le ndlu inegumbi lokulala eliphindwe kabini kunye nokongezwa kwebhedi enye, igumbi lokuhlambela elineshawa kunye nekhitshi. Okufanayo kuxhotyiswe ngemoto yokupaka kunye ne-WI-FI.
Indawo yokuhlala ikwiikhilomitha ezimbalwa ukusuka kwiziko lembali lase-Amalfi, amaziko abakhenkethi aphambili kunxweme lwase-Amalfi kunye nonxweme lwaseSorrento, kunye nendawo ye-archaeological yasePompeii.
Umbuki zindwendwe ngu- Lucy'S